သတင်းစက်ရုံ | တရုတ်သတင်းများထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်း
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန Dynamics ကို
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ္စမတ် 2018 နှင့်မင်္ဂလာနှစ်သစ် 2019 အားလုံးမိတ်ဆွေများ
18-12-22 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ္စမတ် 2018 နှင့်မင်္ဂလာနှစ်သစ် 2019 အားလုံးမိတ်ဆွေများ, သင်သည်သင်၏ကောင်းသောအားလပ်ရက်ပျော်မွေ့မျှော်လင့်ပါတယ်!
18-10-23 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
18-07-16 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
Screen ကိုပုံနှိပ်ကဘာလဲ? မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ထားတဲ့အတွက်အပြားသို့မဟုတ် Cylinder ပုံစံပလပ်စတစ်တစ်ဦးစိုစွတ်သောလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်, ဖန်, သတ္တု, ဒါမှမဟုတ်သစ်သားအစိတ်အပိုင်းအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ ပုံတွေကို image ကိုမျက်နှာပြင်သို့ "ကိုမီးရှို့" သော်လည်းမှင်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အစိတ်အပိုင်းပေါ်သို့တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းနေကြသည်။ ပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် cylindrical scre နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ ...
18-05-28 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ဤဆောင်းပါး7ခြေလှမ်းများနှင့်အတူတီရှပ်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုရန်အမြန်လမ်းညွှန်မိတ်ဆက် Cylinder ပုံစံအလွှာဟာပုံနှိပ်အခါ, ဆလင်ဒါမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းတူညီမူအရရှိပါတယ်။ https://wickedprintingstuff.wordpress.com/screenprinting/: နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ, သင်က link ကို click နိုင်ပါတယ်
18-05-27 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ဝီကီပီးဒီးယားကနေအခမဲ့စွယ်စုံကျမ်းပုံနှိပ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူရောထွေးခံရဖို့မဟုတ်။ မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ကွက်တစ်ပိတ်ဆို့ခြင်းဟာဖယောင်းစက္ကူအားဖြင့်မှင်မှ impermeable လုပ်ဒေသများရှိ မှလွဲ. တစ်ဦးအလွှာပေါ်သို့မှင်လွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြုသည်မထွက်ရတဲ့ပုံနှိပ်ခြင်း technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဓါးသို့မဟုတ် squeegee အဆိုပါ scre အနှံ့ပြောင်းရွှေ့နေသည် ...
Adress: ကြမ်းပြင် 1st, Xilibao အဆောက်အအုံ, Lianhua လမ်းမကြီး 130, Buji မြို့, Longgang ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမြို့, တရုတ်, 518112 ။
ဖုန်းနံပါတ်: +86 159 0945 5710
E-mail ကို: info@lanlinprintech.com